Salamo 41:1-13 "1 Ho an’ny mpiventy hira. Salamo nataon’i Davida. Sambatra izay mahatsiaro ny malahelo; Jehovah hamonjy azy amin’ny andro fahoriana. 2 Jehovah hitandrina sy hiaro azy tsy ho faty; hatao ho sambatra ambonin’ny tany izy, ary tsy mba hatolotrao amin’ny sitrapon’ny fahavalony. 3 Jehovah hanohana azy eo ambonin’ny farafara hitsaboana azy. Ny fandriany rehetra eo am-paharariany dia hovanao. 4 Hoy izaho: Jehovah ô, mamindrà fo amiko; sitrano ny fanahiko, fa efa nanota taminao aho. 5 Ny fahavaloko maniry ahy ho simba ka manao hoe: Rahoviana no ho faty izy, ka ho very ny anarany? 6 Ary raha avy mamangy, izy dia miteny zava-poana; ny fony mamory faharatsiana ho an’ny tenany; mivoaka eny ivelany izy ka milazalaza. 7 Mitakoritsika ahy izay rehetra mankahala ahy; misaina hanisy ratsy ahy izy. 8 Tena zava-dratsy, hoy izy, no aidina aminy; ary raha mandry izy dia tsy hitsangana intsony. 9 Eny, ny sakaizako, izay maha-toky ahy sady nihinana ny haniko, no nanangana ny ombelahin-tongony hamely ahy. 10 Fa hianao kosa Jehovah ô, mamindrà fo amiko, ka atsangano aho mba hamaliako azy. 11 Izao no hahafantarako fa mankasitraka ahy Hianao, dia ny tsy anakoran’ny fahavaloko ahy. 12 Ary ny amiko, dia manohana ahy amin’ny fahitsiako Hianao, ka mampitoetra ahy eo anatrehanao mandrakizay. 13 Isaorana anie Jehovah, Andriamanitry ny Isiraely, hatramin’ny taloha indrindra ka mandrakizay. Amena dia Amena."
Ho any amin’iza moa? Mahatsiaro ho tena ory sy mijaly i Davida eto noho ny fanenjehan’ny fahavalo azy ka miandrandra mafy ny famonjen’Andriamanitra. Tsapany ho mihazona azy amin’ny andro mahory (1) sy ny aretina (3) ary amin’ny andro nahameloka azy (4) Ny Tompo ka dia feno fisaorana amin’izany izy (12,13). Tsy misy afa-tsy Andriamanitra no afaka hianteherany satria na ireo namana izay nifampizara ny manta sy ny masaka taminy aza dia nivadika taminy avokoa (9). Maniry ratsy ny hafa. Toetra mateti-pitranga eo amin’ny fiaraha-monina ny fihatsarambelatsihy na ny fosafosa ambadika hatao amin’ny hafa toy ny hita eto (5-7). Miseho ho namana, manao adidy amin’ny hafa kanefa tsy am-pitiavana no hanaovana izany fa famelezana ivoho. Rehefa zohina dia fahavalo no filaza ny olona tahak’ireny fa tsy namana. Ny vehivavy no tena betsaka manana io toetra io saingy misy ihany koa ny lehilahy. Fadio ny fanao ratsy tahak’izany! Sakaiza manody. Mampahatsiahy antsika ny tantaran’i Jesosy Kristy sy ny apostoly 12 lahy ity tranga eto amin’ny andininy faha 10 ity. I Jodasy izay isan’ny mpianany ihany no namadika sy nivarotra Azy tamin’ireo lohandohan’ny mpisorona (Matio 26:14-15). Mampalahelo ary mampamoy fo mihitsy rehefa sendra ny tahak’izao! Saingy tiana ampaherezana antsika fa misy sakaiza iray izay tena azo antoka sy mahatoky ary afaka resahana amin’ny fotoana rehetra. Tsy mitantara tsiambarantelo Izy fa mitahiry izany ary afaka mihaino tsara sady tsy mandatsa na mitsara. Tsy iza izany fa i Jesosy Kristy. Efa sakaizanao ve Izy?
Saintsaino: Rehefa sendra olana isika, iza no hatonintsika voalohany sy hitantarana ny manahirana?